Haddii Kooxdaada Mawduucan ay sidan oo kale sameeyaan, waad guuleysan lahayd | Martech Zone
Haddii Kooxda Mawduucyadaadu sidan uun sameeyeen, waad guuleysan lahayd
Axad, Juun 25, 2017 Monday, June 26, 2017 Douglas Karr
Waxaa jira maqaallo badan oo horeyba uga jiray sida ugu xun ee ugu badan ee ay u yihiin. Waxaana jira malaayiin maqaal ah oo ku saabsan sida loo qoro nuxur weyn. Si kastaba ha noqotee, ma aaminsani in nooc kasta oo maqaal ah uu si gaar ah waxtar u leeyahay. Waxaan rumeysanahay in asalka waxyaabaha liita ee aan fulin ay tahay hal cunsur - cilmi baaris liidata. Baadhitaan la'aanta mawduuca, dhagaystayaasha, yoolalka, tartanka, iwm. Waxay keeneysaa nuxur aad u xun oo ka maqan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah guusha.
Suuqyayaashu waxay rabaan inay waxbadan ku bixiyaan suuqgeynta waxyaabaha ku jira, laakiin wali waxay ku dhibtoonayaan soo saarista waxyaabo soo jiidasho leh (60%) iyo cabirka waxqabadka (57%). Sujan Patel
Kaliya maahan inaan halgan ugu jirno inaan soo saarno oo aan cabirno istiraatiijiyaddeenna nuxurka leh, waxaan runti soo saaraynaa waxyaabo ka badan inta la cabi karo. Saaxiibkeyga wanaagsan Mark Schaefer, ayaa tan soo waca naxdin ka kooban.
Waan ogahay inaad ku hoosjirto jahwareer mashquuliya waxyaabaha sii kordhaya ee cajiibka ah. Aniga ahaan si fudud oo aan u ilaaliyo "mindshare" ee aan maanta idinkula joogo bartan, waxaan ubaahanahay inaan abuuro waxyaabo sifiican ugafiican, taas oo dabcan qaadan doonta waqti aad u badan. Waxay u badan tahay inaan bixiyo Facebook iyo kuwa kale si aan kuu siiyo fursad aad xitaa ku aragto sababtoo ah tartankan ku saabsan dareenka. Calaamadee Schaefer
Dhibaatadu waxay sii socotaa dhibaatooyinka suuqleyda dhowrkii sano ee la soo dhaafay, sidaas darteed waxaan la shaqeynayay hay'ado waxbarasho oo kala duwan oo ku saabsan horumarinta manhajkooda suuqgeynta waxyaabaha. Guud ahaan, waxaan horumariyay kuweenna safarka suuq geynta, iyo tababbarka ka dhex socda ayaa ku jira nidaam kooxdeennu u horumariyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin macaamiisheenna iyo guryahayagu.
Ma ahan wax fudud oo u baahan dadaal, laakiin halkan waxaa ku qoran liis hubineed si loo hubiyo in kooxdaadu ay soo saarayso waxyaabaha ugu fiican ee suurtogalka ah:
Liiska Hubinta Mawduucyada
Goolal - Maxaad isku dayeysaa inaad ku gaarto waxyaabaha aad ka kooban tahay? Ma waxaa loo daabacay si loo dhiso wacyigelin, kaqeybgal, amar, maareynta beddelaad, hagaajinta haynta, kor u qaadista macaamiisha, ama hagaajinta khibradda guud ee macaamiisha? Sideed u cabbiri doontaa inay run ahaan shaqaysay iyo in kale.
dhegeystayaasha - Yaad wax u qoreysaa xageese joogaan? Tani ma aha oo kaliya inay kuu tilmaamayso sida aad u horumariso waxyaabahaaga, waxay sidoo kale kuu horseedi doontaa inaad daabacdo oo aad ku dhiirrigeliso waxyaabahaaga barnaamijyada kala duwan ama dhexdhexaadiyeyaasha kala duwan.
Suuqa - Sidee bay waxyaabahaagu u calaamadeyn doonaan warshadahaaga? Maxay u baahan tahay si loo wado dareenka iyo kaqeybgalka?
Research - Waa maxay tirakoobyada halkaas ka jira ee dib u soo celinaya waxyaabahaaga? Tirakoobka ayaa had iyo jeer si fudud loo heli karo oo fudud si loo helo. Isticmaalka Google, tusaale ahaan, waxaan eegnay tirakoobka suuqgeynta waxyaabaha si aan u helno xigashada Sujan ee kor ku xusan.
Competition - Muxuu ka kooban yahay tartankaagu mawduuca? Sideed uga fiicnaan kartaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin? Waxaan badiyaa samaynnaa SWOT fudud (Xoogagga, Tabar-darrida, Fursadaha, Hanjabaadaha) macmiilkeenna iyo mowduuca ah in lagu daro kuwa kala duwan oo runtiina ujeedooyinkooda ku gaarsiiya gurigooda. Isticmaalka Xeebaha iyo Buzzsumo, waxaan ku lafaguri karnaa darajada ugu fiican iyo waxyaabaha ugu badan ee la wadaago mowduucaas.
Hantida - Sawirro muuqaal ah, jaantusyo, shaashadaha taageera, maqalka, fiidiyaha… maxay yihiin dhammaan hantida kale ee aad ku dari karto waxyaabaha aad ka kooban tahay si loo hubiyo inay tahay ku guuleysiga waxyaabaha?
Qoraalka - Qaabkeena qoraalka, naxwaha, higgaadinta, qeexida dhibaatada, ansaxinta taladeena, sameynta wicitaan-waxqabad… dhamaantood waa lagama maarmaan in la soo saaro nuxur u qalma dhagaystayaasheena.
Iyadoo aan loo eegin haddii ay tahay tweet, maqaal, ama warqad cad, waxaan sii wadaynaa inaan aragno guul markii aan horumarinayno khadadka ka hor kulanka si loo horumariyo waxyaabahayaga. Mashaariic badan, waxaan la shaqeynaa kooxo gooni ah oo ka socda daafaha dunida si aan isugu soo uruurinno hantida lagama maarmaanka u ah soo saarista waxyaabo badan. Waxaan haynaa kooxo cilmi baaris ah oo ku saabsan soo qabashada tirakoobka iyo saamileyaasha, layliyo loogu talagalay falanqaynta, kooxo naqshadeynta sawirada, iyo xulasho qorayaal ah oo gacanta lagu xushay qaabkooda iyo kartida mowduucyada.
Xitaa ka dib markaan daabacno waxyaabaha, weli kamaanaan qaban. Waxaan daawaneynaa sida ay ugu shaqeyso raadinta iyo bulshada, u habeyn cinwaanada iyo sharaxaada qaababka waxqabad weyn, ku xoojinno waxyaabaha duugga ah sawirada iyo fiidiyowyada, iyo mararka qaarkood xitaa dib u daabac qodobbada maqaallo cusub markay macno sameynayaan Go'aan kasta oo ku saabsan waxyaabahayaga waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo inay tahay ku guuleystay, oo aan la daabicin oo keliya.
Tags: dhagaystayaashaxujowacyigahantida ku jirtaContent Suuqyoolalka suuqgeynta waxyaabahakhibrada macmiilkabeddelaad wadidhawlgelintahagaajinta hayntacilmi baarisFursadahacilmixoogadhaariyeyHanjabaadamacmiil u kiciTabar darroku guuleysiga waxyaabahaQoraalka
Waxyaabaha Gates ama Gates aan ahayn: Goorma? Sababta Sidee…
Jun 25, 2017 at 11: 59 PM
Waan kugu raacsanahay waxaad tilmaantay. Cilmi-baaris qoto-dheer ayaa ah shuruuda koowaad ee lagu xannibayo maqaal aad u qurux badan oo u muuqda inuu dadka ku daro. Farsamada daaraha dhaadheer ee Brain Dean ayaa tusaale ah. Abuuritaanka maqaal qoto-dheer ayaa diiradda saaray ugu horreyntii tilmaamayaasha gaarka ah ee niche bartilmaameedku wuxuu bixin doonaa natiijo wanaagsan. Waxay sidoo kale ka caawineysaa inay matalaan meheradda sidii summad la isku halleyn karo / sharciyeysan.